Bakhathazekile ngezidakamizwa e-Ashdown | News24
Bakhathazekile ngezidakamizwa e-Ashdown
AMALUNGU omphakathi wase-Ashdown akhathazekile ngokwanda kwezinga lokudliwa kwezidakamizwa ezingkho emthethweni kule ndawo.
Lo mphakathi uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi le nkinga isihlasele ngisho izingane ezincane ezifunda ezikoleni zamabanga aphansi kanye namantombazane asemancane asekhethe ukuzi nikela ezidakamizweni.
Ngokuthola kwe-Echo izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu kule ndawo insangu newunga.
UMnuz Xolani Molefe ohlala kuyona le ndawo uthe unqume ukuba aqale uhlelo lokuqoqa abafana namantombazane ngenhloso yokuzijimisa zidlale nebhola okuwumzamo wokuzivikela ekutheni zingamoshi ikusasa lazo.
Uthe lolu hlelo uluqale ngenyanga edlule kanti ulenza ngokuhlanganyela nozakwabo uMnuz Londa Mnikathi naye ohlala kuyona le ndawo.
Uthe: “Into esiyibona yenzeka emphakathini ibuhlungu kakhulu yingakho sithe ake sisukume kube khona esikwenzayo. Abafana namantombazane bebe sebenzisa inkundla yezemidlalo yakule ndawo njenge sidleke sokubhema izidakamizwa. Bebehlala enkundleni kuze kushaye ihora lesi shiyagalombili ebusuku [8pm] bematasa bebhema izidakamizwa.
“Bese kuvulwe ngisho upotsho wokungena, kungasangenwa esangweni ngoba besaba unogada ukuthi uzobavimba uma kungukuthi abezile ukuzo zivocavoca. Sesiwuvalile upotsho sahlanza nenkundla ukuze sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi. Sesiqalile nomsebenzi wokubalekelela ekutheni bazi vocavoce kanti sekuze kwajoyina nezingane ezihlala ezindaweni ezakhelene ne-Ashdown,” kubeka yena.
UMnuz Molefe uthe izidakamizwa kade zaqala ukuba inkinga kule ndawo kodwa okubakhathaza kakhulu wukuthi zisetshenziswa izingane ezincane.
“Asazi nokuthi ziyithathaphi imali yokuthenga lezi zidakamizwa. uma uzibuka uyabona ukuthi izingane ezilungile futhi izimpahla abazigqokayo zisezingeni.”
UMnuz Mnikathi ukhale esifanayo ethi kubaphatha kabi ukubona intsha izinikela ezidakamizweni.
“Sizama ngakho konke okusemandleni ukubakhipha kulento abayenzayo yokusebenzisa izidakamizwa. Baningi abantwana abanamathalente ahlukene kule ndawo kodwa sebezinikele ezidakamizweni.”
Ikhansela lendawo uMnuz Dumisani Phungula uvumile ukuthi inkinga yezi dakamizwa idla lubi kule ndawo kodwa wathi benza konke okusemandleni ukulwa nayo.
Uthe: “Sicela amaphoyisa asebenzisane nathi ukulwa nale nkinga yezi dakamizwa ku-ward 23 ngoba akusiyo inkinga yase-Ashdown kuphela. Siyabona akhona amaphoyisa aseqalile ukuhlola le ndawo kuyasijabulisa kakhulu lokho.
“Enye into eseyiqala ukuba inkinga kule ndawo ukubanjwa kwenkunzi kwibhuloho lase-Ashdown sisola ukuthi kwenziwa ibona labantu abasebenzisa izidakamizwa. Abantu abaqaphele kakhulu uma behamba kule ndawo kodwa-ke sithembisa ukuthi sizoyilwa lempi ngokubambisana nabomthetho, amalungu omphakathi nabazali bezingane,” kusho uMnuz Phungula.